Tsaratanana : dahalo efa ho 40 nanafika, olona 6 natao takalon’aina | NewsMada
Tsaratanana : dahalo efa ho 40 nanafika, olona 6 natao takalon’aina
Tsy manafika fotsiny intsony ny dahalo any ambanivohitra any fa maka takalon’aina. Tato ho ato, miseho lany izany isaky ny misy fanafihana. Tany Tsaratanana, ny 24 desambra teo, tamin’ny 5 ora maraina, tanàna roa samy hafa, tany Bemavo, kaominina Andriamena ny fanafihana iray, ary tany Antongomavo, kaominina Sarobaratra ny faharoa. Dahalo efa ho 40 ny fitambarany nanafika tamin’ireo tanàna ireo. Nirongo basy ary naka takalon’aina miisa enina. Olona iray nalain’izy ireo tany Bemavo, ary olona telo hafa noratrain’izy ireo. Olona miisa dimy nataon’izy ireo takalon’aina tany Sarobaratra, ka ankizy 16 sy 14 taona ny roa tamin’izany. Omby 70 lasan’ireo tany Andriamena, raha 300 kosa tany Sarobaratra.
Zandary manao fisafoana avy ao amin’ny borigady Andriamena no nanao ny fanarahan-dia. Ny zandary avy ao Ankisatra kosa no nanao ny « bouclage ». Nahita izany ireo dahalo ka navotsony avokoa na ny takalon’aina na ny omby ary vaky nandositra izy ireo.
Vao nahare ny tranga ny zandary any Sarobaratra, nanara-dia niaraka tamin’ny fokonolona. Rehefa tonga tao Maroboaly, raikitra ny fifampitifirana ary nisy dahalo naratra fa mbola afaka nitondra ireo omby. Rehefa tonga tao Andranondrantsa amoron-dreniranon’i Mahajamba, nisy fifampitifirana indray ka dahalo telo no lavo tsy afa-namaly intsony. Rehefa nahita izany ireo dahalo, notifiriny ny takalon’aina iray 51 taona. Lasa nandositra niampita ny renirano Mahajamba ireo dahalo ireo ka dahalo iray indray no maty tao anaty rano. Votsotra ny takalon’aina efatra. Azo ny omby rehetra ary naverina tamin’ny tompony.
Mirongatra andro fety
Mirongatra amin’ny andro fety ny asan-dahalo amin’ny faritra maro. Ankoatra ireto tany Tsaratanana ireto, mamely mafy koa ny dahalo any amin’ny faritra Bongolava. Nisy ihany ny hetsika nataon’ny mpitandro filaminana teo aloha teo tany Atsimo, sns, fa saingy any amin’ny faritra hafa indray ny dahalo no manao ny ataony. Tsy manam-pahataperana ny asan-dahalo, ary mihamahery vaika hatrany ary izao maka takalo’aina izao. Eo ihany koa ny fahamaroany sy ny fitaovam-piadiana eny am-pelatanany. Asa, hanao fety milamina amin’ity faran’ny taona ity ireo olona any ambanivohitra?